Public Health in Myanmar: February 2008
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် (metabolism) အတွက် အလွန်အရေးပါသော
ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ နှလုံးခုန်ခြင်း၊ အူလှုပ်ရှားခြင်း၊ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းခြင်း တို့အပြင်
အခြားလုပ်ငန်းများစွာအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးပေသည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်နည်းခြင်း-
များခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ပါက ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းများသည်လည်း မူမမှန်ကမောက်ကမဖြစ်ကာ ရောဂါလ
က္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ဤနေရာတွင် အဖြစ်များသော သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်လွန်
ကဲသောရောဂါ (Hyperthyroidism)ထဲမှ ဂရေ့ဗ်ရောဂါ(Grave’s disease)အကြောင်း ရေးသား
ဂရေ့ဗ်ရောဂါ(Grave’s disease)သည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်လွန်ကဲသောရောဂါအားလုံး၏
၇၅-၈၀% ထိအဖြစ်များသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမများသည် ယောက်ျားများထက် (၈)ဆ
ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ ရောဂါဖြစ်သူ(၉)ဦးတွင် မိန်းမ(၈)ဦးနှင့်ယောက်ျား(၁)ဦးဖြစ်နိုင်ခြေဟု ဆိုလို
ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသက်(၅၀)ကျော်တွင် အတွေ့နည်းပြီး အများဆုံးမှာအသက်(၃၀)မှ(၄၀)အတွင်း
ဤရောဂါကိုအပြင်တွင်အလွယ်တကူအားဖြင့် “လည်ပင်းအဆိပ်ရည်ထွက်သောရောဂါ” ခေါ်ဝေါ်နေ
ကြသည်ကို ကြားရပါသည်။ Diffuse Toxic Goiter ဆေးပညာအခေါ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လျော
ညီထွေအောင် ဘာသာပြန်ရခြင်းကြောင့် မည်သို့ပင်ခေါ်စေကာမူ အဓိပ္ပါယ်ကောင်းစွာသိရှိရန် လို
အပ်ပေသည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရပါက သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများခြင်းသည် အများ
ထင်သလို အဆိပ်ရည်အစစ်မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဆိုးကျိုးရစေခြင်းဟု
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်များရခြင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါခုခံမှုစနစ်ကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း
ထွက်စေသောလှုံ့ဆော်အင်တီဘော်ဒီ(TSH Receptor Antibodies)များထွက်လာကာ သိုင်းရွိုက်
အကျိတ်ပေါ်သက်ရောက်ပြီး T3,T4 ခေါ် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်များလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟော်မုန်း(T3 & T4)အထွက်လွန်ကဲသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောလက္ခဏာများ
ရင်တုန်ခြင်း၊နှလုံးခုန်နှုန်းတစ်မိနစ်တွင် (၁၀၀)ကျော်ထိ မြန်ခြင်း၊*
အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နည်းလာခြင်း(heat intolerance)၊ ချွေးအမြဲပြန်နေခြင်း၊*
စိတ်တိုစိတ်ဆတ်လွယ်လာခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်လွယ်ခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်လာခြင်း၊*
အစားများလာသော်လည်း တဖြည်းဖြည်းပိန်လာခြင်း၊မောပန်းလွယ် နုန်းလွယ်ခြင်း၊*
ရာသီသွေးမလာတော့ခြင်း(သို့)နည်းလာခြင်း၊ သားသမီးမရလွယ်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်စိတ်နည်းလာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိပါကသားပျက်လွယ်ခြင်း၊
ခြေထောက်ညိုသကျည်းတွင် အရေပြားထူအမ်းလာခြင်း၊ (Pretibial Myxedema)* တို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။
* မိမိကိုယ်တိုင်သတိထား သိသာနိုင်သော လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါသည်။
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်ပါက သွေးတွင်း T3 နှင့် T4 ပုံမှန်ထက်မြင့်တက်နေပြီး TSH ပုံမှန်ထက်လျော့
နည်းနေသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်လွန်ကဲသောရောဂါသည် ဆရာဝန်
ကင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါလက္ခဏာများ တွေ့ရပါကစောစီးစွာကုသမှု
ခံယူခြင်းဖြင့် ရောဂါ၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ခံစားရခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်......
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများအကြောင်းကို မေပျို၏ postတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Labels: Hyperthyroidism, Thyroid
ဂေါက်ရောဂါ(၂)မျိုး ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်လို့ရပါသည်။ တစ်မျိုးမှာ မြန်မာဗန်းစကား ဂေါက်ရောဂါ
(ဒီလူတော့ ဂေါက်နေပြီ) နှင့် နောက်တစ်မျိုးမှာ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်အတိုင်းခေါ်သော ဂေါက်(Gout)
ရောဂါပေတည်း။ဂေါက်(Gout)ရောဂါသည် သွေးအတွင်း ယူရစ်အက်စစ်(Uric acid) ပုံမှန်ထက်မြင့်
မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပေသည်။ သွေးအတွင်း(Uricase)အင်ဇိုင်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် ယူရစ်အက်
စစ်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် (uric acid metabolism)ယိုယွင်းကာ ယူရစ်အက်စစ်မြင့်တက်နိုင်သလို ကျောက်
ကပ်လုပ်ငန်း ထိခိုက်သူများတွင်လည်း ယူရစ်အက်စစ်စွန့်ထုတ်မှုယိုယွင်းကာ သွေးအတွင်းယူရစ်
အက်စစ်မြင့်တက်နိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးရှိနေသူများတွင် ယူရစ်အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှု
များစေသောအစားအစာများ (high purine diet) စားသုံးခြင်း၊ အရက်/ဘီယာသောက်သုံးခြင်း၊
အခြားရောဂါကြောင့် ဆီးဆေးပုံမှန်သောက်နေရခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းစသည့်အခြေအနေများကြောင့်
ရောဂါလက္ခဏာ ရုတ်တရက်ပေါ်တတ်ပါသည်။ သွေးအတွင်းယူရစ်အက်စစ်(Uric acid) ပုံမှန်ထက်
မြင့်မားခြင်းကြောင့် ပျော်ဝင်နိုင်မှုအဆင့်(Solubility Limit)ကျော်လွန်ကာ မိုနိုဆိုဒီယမ်ယူရိတ်အမှုန်
(Monosodium Urate Crystals)များဖြစ်ပေါ်၍ အဆစ်(joints)၊ ကျောက်ကပ်(kidney)၊ ပျော့
ပြောင်းတစ်ရှူး(soft tissue) တို့တွင် အနည်ကျခြင်းဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။
လူနာများ၏ ၅၀%ကျော်မှာ ခြေမအရင်းဆစ် ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုဖြင့် လက္ခဏာ
ပြတတ်ပါသည်။ နီရဲရောင်ရမ်းပြောင်တင်းပြီး ခြေအိတ်မဝတ်နိုင်၊ အထိမခံနိုင်လောက်အောင် နာကျင်တတ်ပါသည်။ ဖြစ်ပါများလာလျှင် အခြားအဆစ်များပါ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထိခိုက်လာနိုင်သည်။ အစဉ်အတိုင်းအားဖြင့် ခြေကျင်းဝတ်၊ ဒူး၊ လက်ချောင်းအဆစ်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တံတောင်ဆစ် စသည့်အဆစ်များသို့ ပြန့်နှံ့ရောင်ရမ်းနာကျင်လာနိုင်သည်။
မိုနိုဆိုဒီယမ်ယူရိတ်အမှုန်များ ကျောက်ကပ်တွင်အနည်ကျခြင်းကြောင့် ကျောက်တည်နိုင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်နာခြင်း (nephrolithiasis & renal colic) တို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
တိုဖိုင်(tophi)ခေါ် ယူရိတ်အနည်မှုန်များ အရေပြားအောက်တွင်စုပုံအနည်ကျခြင်း၊
မိုနိုဆိုဒီယမ်ယူရိတ်အမှုန်များ အရေပြားအောက် ပျော့ပြောင်းတစ်ရှူး(soft tissue)တွင် စုပုံအနည်ကျခြင်းကြောင့် ပုံ(၃)ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
အရက် အထူးသဖြင့် ဘီယာနှင့်ဝိုင်တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
သွေးတိုးရောဂါအတွက် သောက်နေရသော ဆီးဆေး(Diuretic)ကို အခြားဆေးဖြင့် ပြောင်းလဲအစားထိုးရန်၊
ပျူရင်း(purine)ကြွယ်ဝသောအစားအစာများမှာ နီရဲသောအသားများ၊ ကလီစာများ၊ ပင်လယ်စာများ၊ ပဲတောင့်၊ ပဲပင်ပေါက် စသည်တို့ကို အလွန်အကျွံ စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်နှင့် အဝမလွန်စေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်။
Posted by General 1 comments
Labels: Gout, Immunology
Posted by Www.KoGyiThu.BlogSpot.Com3comments
မျက်လုံး ၊ မျက်မှန် နဲ့လူ
မျက်မှန် တတ်သင့် သူ နဲ့မျက်စိ ရောဂါ ရနေတဲ့သူ မတူ ပါဘူး ။
မျက်စိ ရောဂါ ရနေတဲ့သူ က မျက် စိ က နာ လဲနာ ၀ါး လဲဝါး ပါတယ် ။
မျက်မှန် တတ်သင့် သူ က တော့ အမြင်ပဲ ၀ါး တယ် ၊ မနာပါဘူး ။
တချိုက မျက်မှန်(ပါဝါနဲ့ )တတ်ရင် တဖြည်းဖြည်းပါဝါတိုးတတ်ရတယ် လို့ထင်ကြတယ် ။ မမှန်ပါဘူး။
မျက်စိဆရာဝန်ကြီး တယောက်က တော့ အခုလို ဥပမာပေးပါတယ်။ဖိနပ်စီးလို့ ခြေထောက်ပိုကြီးလာပြီး ဖိနပ်ပိုကြီးတာကို စီးစီးလာရတာ မဟုတ်သလိုမျိုး ပဲလို့ဆိုပါတယ်။
မျက်လုံးဟာ သဘာဝက အဝေးကြည့်ပိုအားသန်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ် ။ခဏခဏ အဝေးကို ကြည့်ကြည့် ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒိတော့ မျက်လုံးအနားပေးတဲ့ အနေနဲ့ အခုပဲ အဝေးကိုခဏ (at least5secconds )လောက် ကြည့်ပေးပါစို့ လား ။
Posted by Www.KoGyiThu.BlogSpot.Com0comments
ငှက်ဖျားရောဂါသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အဖြစ်အများဆုံးရောဂါများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်
ဖြစ်သည်။ သာမန်ချမ်းတုန်ပြီးဖျားခြင်းမှသည် ဦးနှောက်ထဲရောဂါပိုးဝင်၍ သတိမေ့မျောအသက်ဆုံး
ရှုံးသည်ထိ ဖြစ်စေနိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါကူးစက်ပုံ၊ ရောဂါလက္ခဏာနှင့်
ကာကွယ်ပုံတို့ကို သိရှိထားမှသာလျှင် ရောဂါကိုအချိန်မီကုသနိုင်ပြီး ရောဂါမဖြစ်ပွားအောင်လည်း
၎င်းပိုးအမျိုးအစားထဲမှ P.falciparum ပိုးသည် ဦးနှောက်ထဲထိ ပိုးဝင်၍ ပြင်းထန်စွာဖြစ်စေနိုင်ပြီး
ကျန်အမျိုးအစားများမှာ ၎င်းလောက်ပြင်းထန်မှု မရှိပေ။ သို့သော် သေချာပျောက်ကင်းအောင် မကု
သပါက ရောဂါမကြာမကြာပြန်ဖြစ်ကာ ဘေလုံးနှင့်အသည်းကြီးပြီး အခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ
ငှက်ဖျားရောဂါသည် ငှက်ဖျားရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သော ခြင်ကိုက်ခံရ၍
သာ ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြားကူးစက်နိုင်သောနည်းလမ်းမှာ ငှက်ဖျားပိုးပါသောသွေးသွင်းမိခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်
မိခင်မှ ကလေးသို့ကူးစက်မှုနှုန်းမှာ လွန်စွာနည်းပါးပါသည်။
ငှက်ပျောသီး၊ သင်္ဘောသီး၊ မျှစ်စသည့်အစားအသောက်များ စားခြင်းတို့ကြောင့် (လုံးဝ) လုံးဝမကူးစက်နိုင်ပါ။
အများအားဖြင့်(၂)နာရီမှ (၅)နာရီအတွင်း ချွေးများထွက်ပြီး အဖျားကျသွားခြင်း၊
အခြားသူ မကူညီဘဲ မထနိုင်ခြင်း၊ မတ်တပ်မရပ်နိုင်ခြင်း၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်ခြင်း။
ကယောင်ကတမ်းပြောခြင်း၊ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ မှိန်းလွန်းခြင်း။
ငှက်ဖျားရောဂါသည် ခြင်ကိုက်ရာမှ ကူးစက်သည်။ ခြင်မကိုက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပြီး
ခြင်နှိမ်နှင်းရေးဆောင်ရွက်လျှင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ညအိပ်တိုင်းခြင်ထောင်နှင့်အိပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဆေးစိမ်ခြင်ထောင် သုံးပါ။
အိပ်ယာထဲမဝင်မီ ခြင်မကိုက်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။
ယပ်တောင်နှင့် ယပ်ခတ်ခြင်း၊ အဝတ်အစား ထူထူရှည်ရှည်ဝတ်ခြင်း၊ ခြင်မကိုက်အောင်ဆေးလိမ်းခြင်းဖြင့်လည်း ကာကွယ်နိုင်သည်။
မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ခြင်း၊ ခြင်ဆေးခွေထွန်းခြင်းဖြင့် ခြင်ကိုက်မှုလျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း ရေရှည်တွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် ဤနည်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားမပေးပေ။
ငှက်ဖျားကူးစက်ဒေသသို့ ခေတ္တသွားရောက်သည့်သူများအနေဖြင့် ထိရောက်သောငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးကို သောက်သုံးသင့်သည်။
ယခုအခါ PSI (Population Services International) NGO အဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့မှုကြောင့် ငှက်ဖျား
ရောဂါကုဆေးဝါးများကို မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပဆေးကုခန်းတိုင်းလိုလိုတွင် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ရရှိ
Labels: Malaria, Tropical disease
ယခုအခါ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူဦးရေ တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာနေ
သည့်အတွက် ရောဂါအကြောင်းနှင့် ကူးစက်ပုံကိုသိရှိရန် များစွာလိုအပ်ပေသည်။ အေဘီစီဟုအလွယ်
တကူ ခေါ်ဝေါ်နေကြသော အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးများသည်
ယေဘူယျအားဖြင့် ကူးစက်ပုံတူကြသည်။ ကူးစက်လွယ်ပုံခြင်းသာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အသည်း
ရောင်အသားဝါဘီရောဂါပိုးသည် အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်စေသော HIV ရောဂါပိုးထက်အဆ(၁၀၀)ပိုမို
ကူးစက်လွယ်ပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးကူးစက်ပုံနည်းလမ်းများကို အောက်
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးရှိသူသည် အသည်းခြောက်ရောဂါနှင့် အသည်းကင်ဆာရော
ဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများသဖြင့် ရောဂါမဖြစ်မီကာကွယ်ရန်နှင့် အကယ်၍ရောဂါကူးစက်ခံရပါက မည်ကဲ့သို့
ပြုမူနေထိုင်ရမည်ကို တတ်ကျွမ်းသည့်ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်၍ ကုသမှုခံယူရပေမည်။ အသည်း
ရောင်အသားဝါဘီရောဂါကို ကာကွယ်ဆေးထိုး၍ ကာကွယ်နိုင်ပြီး အသည်းရောင်အသားဝါစီရောဂါ
အတွက် ကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးပေ။ သို့သော် အသည်းရောင်အသားဝါစီရောဂါကို ၈၀% ပျောက်
ကင်းအောင် ဆေးကုသနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း ဆေးကုသမှုစရိတ်ကြီးမြင့်နေသေးပေသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးရှိသူသည် အရက်၊ သံဓါတ်များစွာပါသော အစာနှင့်အား
ဆေး၊ ဗီတာမင်စီများစွာပါသော ဆေးနှင့်အသီးအနှံများကို အထူးဂရုပြုရှောင်ကြဉ်ရမည်။ စီရောဂါပိုး
ရှိသူသည် အရက်သုံးစွဲပါက အသည်းခြောက်နှုန်း ပိုမြန်ဆန်သည့်အတွက် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်၊
ထန်းရည် စသည်တို့ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရမည်။ သံဓါတ်များလျှင် အသည်းတွင် အနာရွတ်ပိုထင်လွယ်
သဖြင့် သံဓါတ်များစွာပါသော အစားအစာ ဥပမာ - အသည်း၊ အမြစ်၊ ကလီစာ၊ သွေးခဲများ၊ သံဓါတ်
များစွာပါသော အားဆေးများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ဗီတာမင်စီသည် သံဓါတ်ကို အူလမ်းကြောင်းမှ
စုပ်ယူမှုများစေသဖြင့် ဗီတာမင်စီများစွာပါသော ဆေးနှင့်အသီးအနှံများ ဥပမာ-ရှောက်သီး၊ သံပရာ
သီး၊ ဂရိတ်ဖရုသီး စသည့်အရည်ရွှမ်းသော အသီးများကို များစွာစားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
Labels: Hepatitis, Hepatitis B, Hepatobiliary system, Liver
လေးဖက်နာနှလုံးရောဂါသည် ကလေးနှင့်လူငယ်ပိုင်းတွင် အတွေ့များသော ကူးစက်နိုင်သောရောဂါ
တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းရောဂါသည် Group A beta-haemolytic streptococcus ဘက်တီးရီးယား
ပိုးကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အများဆုံးမှာ အသက်(၅)နှစ်မှ(၁၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကလေး
သူငယ်များ လည်ပင်းနာ၊ အာသီးရောင်ဖြစ်သူများ၏ ၁၅% မှ ၃၀% သည် ဤရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်စေ
ပြီး ကျန် % မှာ Virus ပိုးးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ Streptococcus ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်သော
လည်ပင်းနာ၊ အာသီးရောင်ခြင်းသည် လေးဖက်နာအဖျားနှင့်နှလုံးရောဂါ၏ မူလအစ ရင်းမြစ်ဖြစ်ပါ
သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာပြပါက ပေါ့ပေါ့တန်တန်မထားဘဲ တတ်ကျွမ်းသော
ဆရာဝန်များနှင့် ကုသမှုခံယူမှသာ လေးဖက်နာအဖျားနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်
Streptococcus ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်သောလည်ပင်းနာ၊ အာသီးရောင်ခြင်းသည် ဖော်ပြပါ
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊
အာသီးတစ်ဝိုက်နီရဲရောင်ရမ်းခြင်း၊ လည်ပင်းအကျိတ်များထွက်လာခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Virus ပိုးကြောင့် ဖြစ်သောလည်ပင်းနာ၊ အာသီးရောင်ခြင်းသည် အဖျားမရှိဘဲ မျက်လုံးနာ၊ နှာစေး၊
ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတို့နှင့်အတူ တွဲရှိနိုင်ပါသည်။
Streptococcus ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်သောလည်ပင်းနာ၊ အာသီးရောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ ပတ်
မှ ၃ ပတ်အတွင်း လေးဖက်နာအဖျားနှင့်အဆစ်နာရောဂါ စတင်ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိပါသည်။ လေးဖက်
ဖျားခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ နုံးခွေနေခြင်း၊
နှလုံးရောင်ခြင်း(pancarditis)ကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ မောခြင်း၊
ASO (Anti-Streptolysin O)မြင့်တက်ခြင်း၊
လေးဖက်နာရောဂါသည် အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာအားလုံးရှိရမည်ဟု မဆိုလိုပေ။ ဆရာဝန်မှသာ
ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်းကို သိထားရန်အတွက်သာဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါ
လေးဖက်နာရောဂါဖြစ်ပွားပြီးပါက နောက်ထပ်အဖန်တလဲလဲမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ဆေးကို အနည်း
ဆုံး(၅)နှစ်ထိ ကုသမှုခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Benzathine Penicillin 1.2 million unit ကို တစ်လ
တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ထိုးခြင်းဖြင့်၎င်း၊ Penicillin-V (250 mg)ဆေးပြားကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်သောက်၍
၎င်း ကာကွယ်ကုသရန် လိုအပ်ပေသည်။
Labels: Heart, Rheumatology
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း လူငယ်များ စုပေါင်း တည်ထောင်ထားတဲ့ တောကျီးကန်း သွေးလှူရှင်အသင်း ( Raven Blood Donor Club ) ရဲ့ တရားဝင် ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာ များ နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ ...
တောကျီးကန်း သွေးလှူရှင်အသင်း ဆိုပြီး မြန်မာလို ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာ တစ်ခုနဲ့ Raven Blood Donor Club ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို စာမျက်နှာ တစ်ခုပါ ... မွန်မြတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သွေးကောင်း သွေးသန့်တွေ အမြန်ဆုံး ရရှိအောင် (၂၄) နာရီ အခမဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ လူမှုရေး အသင်း အဖွဲ့လေး အကြောင်း သိရှိစေလိုတဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ... လင့်ခ် များကို နှိပ်၍ သွားရောက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
လိုအပ်ပါက ကူညီပေး နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ အီးမေးလ် များပါ ထည့်သွင်းထား ပါတယ် ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆေးရုံများမှာ တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေသော လူနာများ သွေးသွင်းကုသရန် လိုအပ်ပါက အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ လူမျိုးဘာသာ မရွေး စေတနာအလျှောက် အခမဲ့ သွေးသန့်လှူဒါန်း ကူညီနေပါတယ်။
RAVEN Blood Donor Club was established in July 2006 by sympathetic, active and young men from various social work areas primarily with the humanity in mind for sharing and bringing in relevant social work experiences and to advocate social responsibility amongst youths through blood donation.
Ko Moe Kyaw
No. 24 (4B), Theikpan Street,
Sin Minn Qtr, Ahlone Township.
West-Yangon, Yangon, Myanmar.
Ko Than Lwin Aung
No. 125, Laydaunggan Road,
Sa/ka Quarter, Thingangyun Township.
East-Yangon, Yangon, Myanmar.
Contact Phones (24 Hours)
- 09 504 3754
- 09 510 3290
- 09 517 5611
Posted by စိုးထက် - Soe Htet !0comments
Labels: Blood, NGO
Our blog is in the process of re-directing toadifferent domain for our readers from inside the country to have easier access. Please bear with us if there is any problem with browsing our blog in the mean time. This should not take more than 24 hours. After that, you will be able to view our blog using either of the following two links:
yemon (on behalf of joint-bloggers)
Situation Update: (February 12, 2008)
we have some problems in re-directing the blog. We will try again during the weekend of February 16. In the meantime, only the Blogspot address will be available.
Situation Update: (February 13, 2008)
ကျွန်ုပ်တို့၏ စုပေါင်းဘလောက်ကို မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကြည့်ရှုသူများ အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် အလို့ငှာ လိပ်စာ ရွှေ့ပြောင်းရန် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ သို့ပါ၍ ဘလောက်ဖတ်ရှုရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါက သည်းခံပေးပါရန် ပန်ကြားလိုပါသည်။ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ၂၄ နာရီထက် မပိုပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားပါက အောက်ပါ လိပ်စာ နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘလောက်ကို လာရောက်လေ့လာနိုင်ကြောင်း
ရဲမွန် (စုပေါင်းရေးသားသူများ ကိုယ်စား)
တိုးတက်မှု အစီရင်ခံခြင်း (၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈)
အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ နှင့် ၁၇ ရက်များတွင် ထပ်မံကျိုးစားပါဦးမည်။ နဂို မူလ လိပ်စာဖြစ်သော ဘလောက်စပေါ့ လိပ်စာကို ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း။
တိုးတက်မှု အစီရင်ခံခြင်း (၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈)
မဂ္ဂဇင်း ဖတ်ရင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုရဲ့ ကလေးလေး အသားဝါတဲ့ အကြောင်းကနေ ဆက်စပ်ပြီး ရေးချင်တာ လေးတွေ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေ မွေးကင်းစမှာ အသားဝါတတ်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်းမသိတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့လို အသားဝါတယ်ဆိုတာ လူ့ဘ၀ရဲ့ ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ လက်ခံနိုင်ဖို့ဟာ ပိုပြီးတောင် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကိုပဲ... မွေးကင်းစ ကလေးတိုင်းနီးပါး အသားဝါကြတာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ သဘာဝတရားရဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါပဲ။
အရင်ခေတ်တုန်းက မ၀ါပါဘူး... အခုခေတ်မှ ဆန်းလာတာလို့ မထင်ပါနဲ့။ အရင်တုန်းက ၀ါမှန်း မ၀ါမှန်း မသိခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ တချို့တွေလည်း ၀ါလို့ ၀ါနေမှန်း မသိဘဲ ပြီးသွားတာတွေ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အသားဝါရခြင်း အကြောင်းကို သိပ္ပံနည်းကျ ဖြေရှင်းချက်တွေ အခိုင်အမာရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ မိဘတွေ အနေနဲ့ သိထားရမှာက အသားဝါတိုင်း ကြောက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အသားဝါတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ဗဟုသုတရှိထားမှ တကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးလေးတစ်ယောက် ၀ါတူးတူးလေး ဖြစ်နေတာ ဘယ်မိဘမှ စိတ်မချမ်းသာနိုင်ပါဘူး။ ဆရာဝန်က မစိုးရိမ်ရဘူး ပြောလည်း ရင်ထဲက အပူနဲ့ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပီပီ ဘေးက ၀ိုင်းပြီး စာဖတ်မယ့်သူတွေလည်း အများကြီးတွေ့ရပါဦးမယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှ ထိုက်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတ မရှိထားရင် ပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂနဲ့ လုပ်မိလုပ်ရာ စွတ်လုပ်ရင်... ကလေးကို တကယ်ချစ်ရာ မရောက်ဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုပို့စ်မှာတော့ မွေးကာစကလေးတွေ အသားဝါတဲ့ အကြောင်းကို ပြောဖြစ်အောင် ပြောတော့မယ်။ မွေးကာစ ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက်အတွင်းမှာ ကလေးအသားလေးတွေက စပြီးဝါလာတတ်ပါတယ်။ မ၀ါတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ါတာက အများစုလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အသားဝါတယ်ဆိုတာ ကူးတတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဆေးရုံမှာ မွေးရင်ဖြင့် အသားတွေဝါလို့ရယ်ဆိုပြီး ရှောင်ကြတဲ့သူတွေ ရှိတာ ကြားဖူးလို့ပါ။
မိဘတွေ အနေနဲ့က ဘာကို အကြမ်းဖျင်း သိထားဖို့လိုတာလဲ ဆိုရင် ကလေးအသားဝါတာနဲ့ ... ဟာ ၀ါပြီ ၀ါပြီ ဆိုပြီး ပြူးတူးပြဲတဲ မဖြစ်ဖို့က အဓိကပါ။ ကလေးမှာ ဒီမိဘပဲ အားကိုးနေရတာ မိဘက ပြာနေပြီဆိုရင် ကလေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ခက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကလည်း မိဘကို ပြောရဆိုရ ခက်ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ရှုပ်ထွေးတာတွေ ဖြစ်တာပေါ့နော်... အမေက ငိုလိုက် အဖေက ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိလိုက်။
အသားဝါတာ ကြောက်စရာ မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ ကြောက်စရာ ကောင်းတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်တဲ့အထိ အသားဝါတာတွေ အသက်ဆုံးရှုံးတာ အထိ ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့လို အစွန်း ၂ ဖက် ရှိနေတော့ မိဘတွေ အနေနဲ့ ပူတာလည်း မမှားလှဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပူသင့်တဲ့ အချိန်မှ ပူတာ ကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ... ကလေးက ချက်မသန့်လို့ ပိုးဝင်ပြီး ၀ါတာ။ အင်မတန်ဆိုးပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုး မဖြစ်အောင်က အစောကြီးထဲက ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။ ချက်ဖြတ်ပြီးတဲ့ ကျန်တာလေးကို သန့်အောင်ထားဖို့ပါပဲ။ ဘာမှ မ၀င်စေရပါဘူး။ ဆရာဝန်တွေက ကလေးချက်ကို ဘာမှ မကလိဘဲ ထားတာက အရက်ပြန် ဆွတ်တာထက်တောင်မှ ချက်မြန်မြန်ကြွေစေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကလေးလေး ထွက်လာပြီဆို အဲ့ဒီချက်ကိုလည်း ၀ိုင်းပြီး ကလိချင်လိုက်ကြတာဆိုတာ... လူတွေများ ခက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကလေးမှာ သွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါရှိရင်... အဖေအမေရဲ့ သွေးအုပ်စု မတူရင် စသဖြင့် ၀ါတတ်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဆရာဝန်ရဲ့ အပိုင်းမို့လို့ သူက ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အသားဝါလို့ ဘာလုပ်ရမယ် ဘာညာ ဘာညာ...။ အခုပို့စ်က ရိုးရိုး ပုံမှန် ၀ါနေကျ အကြောင်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ပြောချင်တာမို့လို့... ရောဂါတွေ အကြောင်း ရေးမနေတော့ပါဘူး။
နောက် ထူးဆန်းတဲ့ အချက်တစ်ခု ပြောပါဦးမယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နို့တိုက်တဲ့ကလေးတွေမှာ ပိုပြီး အသားဝါတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မပြောဘဲထားထားလို့ လူတော်တော်များများ မသိကြဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
နို့တိုက်တဲ့ ကလေးမှာ အသားဝါတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ တချို့က မိခင်နို့ကို ခဏ ဖြတ်ပေးရသလို မဖြတ်ဘဲနဲ့ ပြန်ကောင်းတာလည်း ရှိပါတယ်။ (နို့မှုန့်တွေ ရောင်းကောင်းတာလည်း မပြောနဲ့)
ပုံမှန်အသားဝါခြင်းဟာ ကလေးကို ပြင်ပ ရောဂါအချို့က ကာကွယ်ပေးတဲ့ စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ယူဆလာကြပါတယ်။ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတွေတော့ ရှာနေဆဲပါပဲ။
မိဘတွေ အနေနဲ့ လုပ်ရမှာကတော့ ကလေးမွေးပြီးရင် ချက်ကို သန့်အောင်ထားဖို့ရယ်၊ ကလေး မှိန်းတာ နို့စို့နည်းတာဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောဖို့ရယ်၊ မစိုးရိမ်ရတဲ့ ပုံမှန်အသားဝါခြင်းမျိုးမှာ အပူတွေ မလွန်ကဲဖို့ရယ် အဓိကပါ။
အသားဝါတဲ့ ကလေးတွေမှာ မီးချောင်းပြပြီး အ၀ါလျော့အောင် လုပ်ကြပါတယ်။ မီးချောင်းအလင်းတွေ မျက်စိထဲ မ၀င်အောင် သတိထားရပါမယ်။ ကလေးက မီးအပူကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတတ်လို့ နို့ပိုတိုက်ရပါမယ်။ မွေးမွေးချင်းကစပြီး နို့တိုက်ခဲ့ရင် ကလေးဝါတဲ့ အချိန်မှာ နို့ကောင်းကောင်းလိုက်နေပြီမို့ ကလေးအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ ကလေးစို့လေ နို့ထွက်လေမို့ မလောက်မင ဖြစ်မှာ ပူစရာ မလိုပါဘူး။ အမေက ရေ၊ အရည် များများ သောက်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
အတိုချုပ် သဘောမျိုးရေးထားလို့ မပြည့်စုံတာတွေ ဖြည့်စွက်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။
Posted by July Dream0comments
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ပန်ကရိယမှ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း လုံလောက်စွာ
မထုတ်လုပ်နိုင်၍၎င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းအား ထိရောက်စွာအသုံးမချနိုင်၍၎င်း၊
သွေးအတွင်းအချိုဓါတ်(Glucose)မြင့်တက်၍ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ အချိန်
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ သက်သာစေ၇န် ……
သင့်တော်သည့်အစားအစာများကို ရွေးချယ်၍ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် စားသုံးခြင်း၊
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်း၊
ကယ်လိုရီစားသုံးမှု လျှော့ချခြင်း နှင့်
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များအနေဖြင့် ဂလူးကို့စ်သကြားကို ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန် ထုတ်ပေး
နိုင်သည့်အစာများကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါသည်။ အစာတစ်မျိုးကိုစားသုံးလိုက်ပြီးနောက်
ထိုအစာတွင်ပါဝင်သည့် ကစီဓါတ်(carbohydrate)များသည် ဂလူးကို့စ် (Glucose)အဖြစ်
သွေးအတွင်း၌ မည်မျှုမြန်မြန်နှင့်များများ ရောက်ရှိသွားသည်ကိုတိုင်းတာသည့် ယူနစ်တစ်
ခုမှာ “Glycaemic Index” ဖြစ်ပါသည်။ Glucose ၏ Glycaemic Index ကို ၁၀၀ ဟူ၍
စံထားပြီး အစားအစာအမျိုးမျိုး၏ သွေးအတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်မားစေသည့်နှူန်း
Glycaemic Index ကိုဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။Glycaemic Index မြင့်ခြင်းသည် သွေးအတွင်း
သကြားဓာတ်မြင့်တက်နှူန်းမြန်ဆန်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး Glycaemic Index နိမ့်ခြင်းသည်
သွေးအတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်နှူန်း နှေးကွေးသည့်အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါသည်။
Glycaemic Index နိမ့်သောအစာများကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါမည်။
အစားအစာနှစ်မျိုးသည် Glycaemic Index ချင်းတူနေလျှင် အစားအစာ၌ပါဝင်သည့်
ကစီဓါတ်(carbohydrate)ပမာဏ ကိုကြည့်၍ ကစီဓါတ်(carbohydrate)နည်းသော
Eg. အစားအစာတစ်မျိုး၏ Glycaemic Index = 70
ထိုအစားအစာ 100g တွင် carbohydrate 40g ပါလျှင်
Glycaemic Load = Glycaemic Index
x အစာတွင်ပါဝင်သည့် carbohdrate အလေးချိန်
ဆန်ဖြူ (Instant) ၈၇ ၃၆
ဘာစမာတီဆန် (Basmati) ၅၈ ၂၂
ဆန်လုံးညို ၅၀ ၁၆
ခေါက်ဆွဲ (Instant) ၄၇ ၁၉
ပေါင်မုန့် (White Bread) ၇၀ ၁၀
ပေါင်မုန့် (Whole wheat Bread) ၇၇ ၉
အာလူး (Microwaved) ၈၂ ၂၇
အာလူး (မီးဖုတ်) ၈၅ ၂၆
အာလူးကြော် ၇၅ ၂၂
အာလူးပြုတ် ၈၈ ၁၆
ကန်စွန်းဥ ၆၁ ၁၇
မျောက်ဥ (Yam) ၃၇ ၁၃
မုန်လာဥနီ (Carrot) ၄၇ ၃
ကုလားပဲ ၂၈ ၈
ပဲကတ္တီပါ ၂၈ ၇
ပဲထောပါတ် ၃၁ ၆
ပဲနီလေး (Lentil) ၂၉ ၅
ပဲပုတ် ၁၈ ၁
ငှက်ပျောသီး ၅၁ ၁၃
သင်္ဘောသီး ၅၉ ၁၀
သရက်သီး ၅၁ ၈
စပျစ်သီး ၄၆ ၈
နာနတ်သီး ၅၉ ၇
ပန်းသီး ၃၈ ၆
လိမ္မော်သီး ၄၈ ၅
ဆီးသီး ၃၉ ၅
ဖရဲသီး ၇၂ ၄
သစ်တော်သီး ၃၈ ၄
နို့ဆီ ၆၁ ၃၃
ဒိန်ချဉ်(Yogurt,Low Fat) ၃၃ ၁၀
ရေခဲမုန့် ၆၁ ၈
နို့(အဆီထုတ်) ၃၂ ၄
နို့ ၂၇ ၃
ဂလူးကို့စ်(Glucose) ၁၀၀ ၁၀
ပျားရည် ၅၅ ၁၀
ကြံသကြား(Sucrose) ၆၈ ၇
နို့သကြား(Lactose) ၄၆ ၅
သစ်သီးသကြား(Fructose) ၁၉ ၂
လင်မနစ်(Lemonade) ၆၆ ၁၃
လိမ္မော်ရည် ၅၂ ၁၂
ပန်းသီးဖျော်ရည် ၄၀ ၁၂
ကိုကာကိုလာ ၆၃ ၆
ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အကြမ်းအားဖြင့် အဓိကအစာအုပ်စု(၃)မျိုး
(၁) လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရမည့် အစားအစာများ
ဂလူးကို့စ်၊ သကြား၊နို့ဆီ၊ ထန်းလျက်၊ ကြံသကာ၊ ၄င်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော
(၂) အသင့်အတင့်သာစားသုံးနိုင်သော အစားအစာများ
ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပိန်းဥ စသည့် ကစီဓါတ်များသော အစာများ၊
ချိုသောအသီးအနှံများ၊ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ၄င်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောအစားအစာများ၊
(၃) ဆန္ဒရှိသရွေ့ စားသုံးနိုင်သော အစားအစာများ
အသား၊ ငါး၊ အချိုဓါတ်မရှိသော အသီးအနှံများ၊ အရွက်များစသည်တို့ကို စားသုံး
(Dr. Win Thein-Mogok)
Posted by General3comments
Labels: Diabetes, Non-communicable disease